Bamboo Ziplock Bag Organizer- လက်ကားရောင်းချသူများ အွန်လိုင်း
ဇစ်သော့အိတ်များနှင့် အိတ်များဖြင့် ပြည့်နေသော စက်ရုံမီးဖိုချောင်အံဆွဲတွင် ပရမ်းပတာ လှည့်ပတ်ကာ ဖွင့်ရန်ကြိုးစားတိုင်း ၎င်း၏အပေါ်ထပ်တွင် ကတ်ထူပုံးတစ်ခုနှင့် ချိတ်မိသွားသည် - bamboo-ya! ဤသိုလှောင်မှု hack ခြင်းကိုခံယူပါ။ ဇစ်သော့အိတ်စီစဉ်သူနှင့်ရေပေးစက်သည် 15"Lx11.8"Wx3"H သဘာဝဝါးသေတ္တာ wi...
OEM Bamboo Zipblock Storage Drawer Organizers Factory သည် သင့်လုပ်ငန်းအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။
ဤသိုလှောင်အိတ်အံဆွဲ စီစဉ်သူများသည် သင်၏ Ziploc အိတ်များကို သေသေသပ်သပ် ကိုင်ဆောင်ထားကြသည်။ ဤပို့စ်တွင် တွဲဖက်လင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် လင့်ခ်တစ်ခုကို နှိပ်ပြီး တစ်ခုခုကို ဝယ်ယူပါက ကျွန်ုပ်သည် ကော်မရှင်ခအနည်းငယ် (သင့်အတွက် အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ) ရရှိနိုင်ပါသည်။) ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ဖော်မှုမူဝါဒကို ကြည့်ပါ Storage Bag Drawer Organizers H...
မီးဖိုချောင်အံဆွဲအတွက် ဝါးဇစ်သော့အိတ် သိုလှောင်မှု စီစဉ်သူ MOQ 200 သတ်မှတ်
ဟေး အားလုံးပဲ! Bridge Style သည် သင့်စိတ်နှလုံးဆန္ဒရှိနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ DIYs အားလုံးကို သင့်ထံသို့ ယူဆောင်လာစေရန်အတွက် ယခုအပတ်တွင် ဘလော့ဂ်ဂါသူငယ်ချင်းများနှင့် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ link တွေကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရပါမယ်... သင့်ကိုယ်သင် စုစည်းဖို့ တကယ်ကောင်းတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ရှိပါတယ် ။ အရမ်းရယ်ရတယ်! ငါ super s နဲ့လာနေတယ်...
သင်၏ Amazon လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန် TikTok ဗျူဟာများ
"TikTok ငါ့ကိုဝယ်ခိုင်းတယ်" (#TikTokMadeMeBuyIt) သည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်တွေ့ရှိချက်များကို မျှဝေရန်အတွက် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများ အသုံးပြုသည့် နာမည်ကြီး TikTok hashtag များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သြဇာလွှမ်းမိုးသူအများစုသည် #AmazonFinds ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် Amazon ပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကို အခြေခံထားသည်။ ၎င်းသည် ကြည့်ရှုမှု 1.5B ကျော်ရှိသည်။ အသုံးပြုသူအများအပြားသည် sh ...
Suppliers တွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ ဘာတွေစဉ်းစားရမလဲ
ပေးသွင်းသူများကို နှိုင်းယှဉ်သောအခါတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာမှာ သင်၏ Amazon အတွက် ပေးသွင်းသူတစ်ဦးကို ရှာဖွေသည့်အခါ၊ သင်စဉ်းစားနေသော ပေးသွင်းသူများကြားတွင် နှိုင်းယှဉ်မေးမြန်းရန် လိုအပ်သည့်အချက်များစွာရှိပါသည်။ ဤသည်မှာ ပေးသွင်းသူအား ဈေးဝယ်သည့်အခါ မေးမြန်းရမည့် ဥပမာအချို့ဖြစ်သည်- ပို့ဆောင်ချိန်အတွက် ...
သင်ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆန္ဒရှိပါစေ သင့်မီးဖိုချောင် အံဆွဲတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ စုစည်းနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (ငါ့ကိုယုံပါ—နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် မကြာသေးမီကမှ ကိစ္စရပ်များကို ကျွန်ုပ်လက်ထဲသို့ အပ်လိုက်ပါသည်။) ဤစီစဉ်သူများသည် အနည်းဆုံး သင့်အား ကူညီနိုင်သင့်သည်။ သူတို့အားလုံးဟာ အလွန်စမတ်ကျပြီး ကျွန်တော်တို့အားလုံး နှစ်သက်ကြတဲ့ ပလတ်စတစ်အစုတ်ပလတ်စတစ်တွေကို ကျော်လွန်သွားကြပါတယ်။
123456 နောက်တစ်ခု > >> စာမျက်နှာ ၁/၆